'नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा' : प्रधानमन्त्री ओली
‘नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा’ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं, २८ कात्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लागेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चीनका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री लु सुगाङ र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको भेटमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले हिँड्न थालेको समृद्धिको बाटोमा मित्र राष्ट्रहरुबाट उदारतापूर्वक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । ‘समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोग अपेक्षा गरिएको छ त्यसमा पनि नजिकका छिमेकीहरुबाट थप सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उधृत गर्दै उनका परराष्ट्र सल्लाहाकार डा. राजन भट्टराईले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र चीन सदियौं देखिको सम्बन्ध रहेको स्मरण गरेका छन् । ‘हामी एउटै हिमालको वारी पारी बसेका, एउटै हिमालको मुलको पानी खाएका छिमेकी हौं’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘हामी भूगोल,संस्कृति,रहनसहन र जनस्तरबाट पनि नजिक छौं ।’
चीनियाँ मन्त्री सुगाङले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा अधिकत्तम संख्यामा नेपालमा पर्यटक भित्र्याउने चीनको तयारी भएको बताएका छन् । गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको मन्त्री सुगाङले छलफलमा जानकारी गराएका छन् ।
‘नेपाल आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा’ ः प्रधानमन्त्री ओली
‘नेपालको परम्परागत र सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकनका लागि चीनियाँहरु बढी आकर्षित छन्’ मन्त्री सुगाङको भनाइ उधृत गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘भूकम्पपछिको पून निर्माणको क्रममा रहेका यस्ता संरचनाको मौलिकपनलाई कायम राख्न उपयुक्त हुन्छ । यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालिन फाइदा पुग्नेछ ।’
Tagsआर्थिक विकास केपी शर्मा ओली समृद्धि